Harry Maguire: "Ciyaartoyda Manchester United Waa Inay Qaataan Mas'uuliyadda"
HomeWararka CiyaarahaHarry Maguire: “Ciyaartoyda Manchester United waa inay qaataan mas’uuliyadda”
Harry Maguire: “Ciyaartoyda Manchester United waa inay qaataan mas’uuliyadda”
November 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa ku adkeystay in ciyaartoyda kooxdu ay “u baahan yihiin inay qaadaan mas’uuliyadda” wixii dhacay qeybta hore ahaa ee xilli ciyaareedka 2021-22.
Shan guuldarro oo ka soo gaartay kooxda todobadii kulan ee ugu dambeysay Premier League ayaa keentay in Ole Gunnar Solskjaer uu waayo shaqadiisa tababarenimo subaxnimadii Axadda.
Maguire, oo kaarka cas loo taagay sabtidii guuldaradii 4-1 ee Watford, ayaa sheegay in ciyaartoyda kooxdu ay “aad uga xun yihiin” bixitaanka Solskjaer ayna waajib ku tahay inay “ mas’uuliyad weyn iska saaraan” dhacdooyinkii dhacay.
“Ciyaartoyda waxaa looga baahan yahay inay qaataan mas’uuliyadda, dhammaanteen aad ayaan uga niyad jabnay arrintaas, waan ognahay inaanaan ku filneyn, waan ka hadalnay taas, Maguire ayaa u sheegay suxufiyiinta.
” natiijadii dhawaanahan ma ahayn mid ku filan, waa inaan qaadnaa mas’uuliyad weyn.”
Maguire ayaa la safri doona kooxda Man United talaadada kulanka Champions League ee Villarreal laakiin waxa uu ganaax ku seegi doonaa kulanka Premier League ee ay Axada la ciyaari doonaan kooxda Chelsea.